Kedu ihe bụ PPC? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na P	» PPC
PPC bụ okwu mkpọ okwu maka -Kwụ ụgwọ kwa-Pịa.
Ụdị mgbasa ozi ịntanetị ejiri ebugharị okporo ụzọ. Pay-kwa-click na-ejikọkarị ya na igwe ọchụchọ na netwọk mgbasa ozi ebe a na-enye ntụpọ mgbasa ozi na nyiwe njikwa mgbasa ozi. Mgbe etinyere mgbasa ozi ngosi ma ọ bụ mgbasa ozi ederede, onye mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ maka netwọkụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ netwọk mgbasa ozi, ego a na-ekewakarị n'etiti netwọk na onye mbipụta njedebe ebe a hụrụ mgbasa ozi ahụ.